FBC - Koomiishinichi midhaan deeggaramtoota akka qaqqabuuf hojjetamaa jira jedhe
Finfinnee, Caamsaa 9,2009(FBC) -Abbootiin qabeenyaa Birrii miiliyoona 14 oliin midhaan nyaataa bitaniii lammiilee hongeen miidhamaniif deeggarsa kennaa jiraachuusaanii Koomiishiniin Hoggansa Sodaa Balaa Oromiyaa beeksise.
Qorannoo Arfaasaa duraa taasifameen naannoo Oromiyaa keessatti jijjiirama qilleensaa wajjin wal qabatee lakkoofsi miidhamtootaa miiliyoona 2 fi kuma 49 fi 871 ture.
Qorannoo sabsii booda taasifameen ammoo lakkoofsi miidhamtoota balaa yeroodhaa gara yerootti dabalaa dhufuu isaatiin lakkoofsi namoota gargaarsa jala galan miiliyoona 3 fi kuma 605 fi 254 oltti guddaachuu isaa koomiishinarri Koomiishinii Hoggansa Sodaa Balaa Oromiyaa obbo Makoonnin Leenjiisaa ibsaniiru.
Lakkoofsi miidhamtoota balaa kun dabalus, deeggarsi gama mootummaa federaalaa, naannoo, dhaabbilee miti mootummaa fi lammiilees cimee itti fufeera.
Keessattuu deeggarsa lammiin lammiidhaaf taasifamaa jiru kallaattii hundaan cimee itti fufuudhaan lubbuun nama kamiyyuu sababa nyaata dhabuutiin darbuu hin qabu dhaadannoo jedhuun ummatni godinaalee Oromiyaa keessa jiratu naannoo oomisha gahaa argatan ummata hanqinni midhaan nyaataa qunnameef deggarsa wal irraa hin cinnee taasisaa jiru.
Tibba kanas abbootiin qabeenyaa, magaalaa Finfinnee keessa jiraatan, bankiin Awaashii fi Bankiin Hojii Gamtaa Oromiyaa ummata keessaa koree filachuun Birrii miiliyoona 14 fi kuma 616 ta’u walitti qabuun walumaa galatti midhaan boqqolloo kuntaala kuma 23 fi 200 bituun ummata hanqina midhaan nyaataatiif saaxilamaniif arjoomaniiru.
Akkaataa adeemsa koree kanaatiin Koomiishinii Hoggansa Sodaa Balaa Oromiyaa baay’ina miidhamtoota balaa ragaa qabatamaa irraatti hundaa’uun, qooddii midhaanii miidhamtoota balaatiif taasifameen godina Booranaatiif midhaan kuntaala kuma 10 fi 800, Gujiif midhaan kuntaala kuma 5600, Baaleef midhaan kuntaala kuma 3 fi 600 Gujii lixaaf kuma 3 fi 200 qoodamee dabareedhaan geejibsiifamaa jiraachuun ibsameera.
Dabaree duraatiin midhaan godina Booranaatiif ramadame garasitti kan geejibsiifame yoo ta’u, kanneen hafaniifis itti fufa.
Oduuwwan Biroo « Hojjattoonni waajjirichaa caasaa haaraa hojjatamee ji’a sagal miindaansaa osoo hin kaffalaminif xalayaa birootiin bakka bu’uusaa irratti komii dhiheessan	Qubannaan seeraan alaa godina Wallaga bahaa saaxilame »